» मैले बुहारी मारेको छैन,बुहारी जीउँदै छिन,! “बुहारी तिमी जहाँ भए पनि घर आइदेउ”! भन्दै रुदै मिडियामा आइन, के हो त सत्य ? (भिडियो हेर्नुहोस) मैले बुहारी मारेको छैन,बुहारी जीउँदै छिन,! “बुहारी तिमी जहाँ भए पनि घर आइदेउ”! भन्दै रुदै मिडियामा आइन, के हो त सत्य ? (भिडियो हेर्नुहोस) – हाम्रो खबर
मैले बुहारी मारेको छैन,बुहारी जीउँदै छिन,! “बुहारी तिमी जहाँ भए पनि घर आइदेउ”! भन्दै रुदै मिडियामा आइन, के हो त सत्य ? (भिडियो हेर्नुहोस)
काठमाडौं ।म्याग्दी बेनी घर भएकी सुनमाया रत्न बुहारीको खोजि को लागि मिडिया मा आएकी छिन्। माइत गएकी बुहारी जब घर फर्किन , उनि घर मा आए पछि सामान्य भ’नाभन , सामान्य झ’गडा भयो। झ’गडा भएपछि बुहारी घर बाट निस्किन , उनि निस्केपछि धेरै लामो समय सम्म पनि बुहारी घर फ’र्किनन। बुहारी घर नआएपछि माइती पक्षले सासु र ज्वाई लाई बे’प’त्ता मु”द्दा दा’यर गरे। ज्वाई भने १३ महिना देखि का’रा’गा’र मा छन्। सासु भने ४ महिना पछि छु’टेकी छिन्।
बुहा’रीको खोजि गर्दै सा’सु मिडि’यामा आए’की छिन् , माइत बाट आएकी बुहारी एकाएक रि’साएर हिडेपछि हामि थुना मा पर्यौ। बुहारीको माइती ले हामीले मा’रेको आ’रो’प लगाए पनि यो झु’टो छ। बुहारी निस्केको मैले देखे’को पनि छैन , छोरा बुहारीको झ’ग’डा परे पनि मैले केहि भनिन। मैले कहिले का’ही नबो’ल्दा किन तिमि हरु रि’साएको छौ र भनेर भन्थे। मैले क’हिले केहि भनेन , अझ उनि ५ महिनाको ग’र्भ’वती थिन।बुहारी घर बाट नि’स्केपछि उनि पेट मा भएको बच्चा को माया ले भए’पनि म’र्न स’क्दैनिन , कहाँ छौ मनिसा जहाँ भएपनि आमा सम्झे’र आउ।
यो पनि …पुर्बमा भेटियो जादुमय स्वरको धनी, ढुङ्गावाली ! “खोला भित्र ढुङ्गा खोजेर आमा बाबा पाल्ने सहसी छोरी” हेर्नुहोस सबैलाइ रुवाउने कथा( भिडियो सहित)
काठमाडौं ।एउटा गरिब परिवा’रमा जन्मिएकी रोदा राई जसको आवाजमा छुट्टै किसिमको जादु सुनिन्छ । पहाडको एकलास अनि खोलाको नजिकैमा उनको घर रहेको छ । घरको आर्थिक अवस्था एकदमै नाजुक रहेको परिवारमा बिचरा कलिलै उमेरमा सम्पुर्ण जिम्मेवारी बोकेकी रोदा राईले निकै मीठो गित गाउछिन । उनले गाएको गित सुनेर सबै चकि’त हुन्छन । जा’दुमय स्वरकी धनी रोदाले बिहानैदेखि खोलाभित्रको ढुङ्गा निकालेर एक ठाउमा भेला गरेर थुपारेर बिक्री गरेर घर परिवार र आमाबुबा पाल्छिन ।
आज सुपर अनलाइन टिभीको टिम उनले ढुङ्गा टिप्ने काम गर्दै गरेको खोलामै पुगेर केहि कुराकानी अनि उनको प्रतिभा युटुबमा सुपर अनलाइन टिभिमा राखेको छ । सुपर अनलाइन टिभिका प्रस्तोता समीर सुवेदीले गरेको कु’राकानीमा रोदाले आफ्ना दुख सुख अनि सम्पुर्ण कथा सुनाइन । उनका बुबा’ले आर्थिक अवस्था नाजुक भएका कारण आफुले छो’रिको गायिका बन्ने सपना पूरा गर्न नसकेको बताउदै आँसु झारेका थिए । उनलाई सल्लाह सुझाब अनि केहि सहयोग गर्न चाहनेले सुपर अनलाइन टिभिका समीर सुबेदीलाई ९८१४९३०७३६ मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । बोल्दा बोल्दै एक्कासि रुन थालेकी रोदाले मनै छुने गितहरु एकपछी अर्को गर्दै यसरी सुनाइन ।